I-Pragmatic Play Casinos e-Ningizimu Afrika - Abahlinzeki beSoftware
Ikhaya / Abahlinzeki begeyimu / amakhasino e-pragmatic play e-ningizimu afrika
Amakhasino e-Pragmatic Play e-Ningizimu Afrika
I-Pragmatic Play ingomunye wabahlinzeki besofthiwe yemidlalo yasekhasino edijithali yedeskithophu kanye neyeselula. Le nkampane yasungulwa ngonyaka we-2015, futhi esikhathini esifushane ikhona, iye yaphumelela ekwakheni iphothifoliyo esebenzayo yemidlalo yasekhasino. Le nkampane ineqembu elincane elinabochwepheshe abakha izinhlelo abanethalente kakhulu abakhuthazeke kakhulu ukukhiqiza imidlalo yasekhasino ye-inthanethi esezingeni eliphakeme.
I-phothifoliyo yemidlalo ye-Pragmatic Play inemidlalo engaphezulu kwengu-150, nemidlalo emisha sha efakwa njalo. Banikela ngohlu lwemidlalo eminingi ebabazekayo kanye nohlu lwezici eziholela isipiliyoni esithakazelisayo nesijabulisayo sokudlala. Eminye yemidlalo ehamba phambili ye-Pragmatic Play ibandakanya ama-slot evidiyo afana ne-Hot Safari, i-Mighty Kong, i-Bee Land, i-Grave Grabbers, i-Sugar Rush, i-Black Diamond, i-Magic crystals, neminye.
Yonke imidlalo ye-Pragmatic Play yakhiwe ngokusebenzisa ubuchwepheshe be-HTML5 bakamuva kakhulu futhi itholakala kalula kuwo wonke amapulatifomu. Isofthiwe inenguqulo ye-PC ongayidawuniloda, nengafinyelelwa kusiphequluli sewebhu usebenzisa imodi yokudlala esheshayo, futhi iyahambisana neselula okusho ukuthi yenzelwe i-Android ne-iOS kanti namanye amadivayisi eselula.
Amakhasino E-inthanethi e-Pragmatic Play Amukela Abadlali baseNingizimu Afrika
R75,000 Ibhonasi Lokukwamukela + 25 ama-spins Ayikho Idiphozithi
750% Ibhonasi ne 110 Izikhathi Zokudlala Mahhala + 25 ama-spins Ayikho Idiphozithi
Esinye isici esingcono kakhulu ngesofthiwe ye-Pragmatic Play Yindawo Yomphathi yayo ehlinzeka ngohlelo olubanzi lwabo-opharetha. Igcina lonke ulwazi olubucayi, kubandakanya i-app yegeyimu. Ama-akhawunti angaphathwa futhi kunikezwe imvume kubaphathi kalula.
Isofthiwe ye-Pragmatic Play yazelwa ukuba nesivinini sokuvula embonini yokudlala. Idawunilodi yenzwe yabancane futhi idawunilodeka ngokushesha esikhathini esifushane. Uma usuyidawunilodile wayifaka isofthiwe, imidlalo ethile oyidawunilodayo izoqhubeka nokudawuniloda ngemuva ngenkathi wena udlala.
I-Pragmatic Play iphinde inikeze imidwebo nemisindo emihle kakhulu ukuze ube nesipiliyoni ssangempela sokudlala. Abasebenzisi bangenza ngezifiso imidlalo ngokuya ngesimo somsindo nomculo wegeyimu. Ngaphezulu kwalokhu, inikeza imininingwane eningiliziwe yokuthi ungayidlala kanjani imidlalo etholakalayo. Abasebenzisi futhi bangavula amawindi amaningi omdlalo ngokusebenzisa uhlelo lokuzulazula lwe-tab.
Ezokuphepha kanye Nokudlalisana Kahle (Fair Play)
Ukuphepha kubalulekile futhi i-Pragmatic Play isebenzisa ubuchwepheshe bamuva bokuguqula iminingwane ukuqinisekisa ukuthi imininingwane yabo bonke abadlali igcinwe iphephile. Le nkampane ihlinzeka ngemidlalo yabo ye-inthanethi kuphela kumasayithi okugembula anamalayisense nezindawo zokugembula ezisemthethweni okusho ukuthi abadlali bangaqiniseka ukuthi badlala endaweni ephephile. I-RNG esetshenziswa yi-Pragmatic Play ivivinye ngabantu abazimele futhi kutholakale ukuthi iphathwe kahle. I-Pragmatic Play ihlolwe ngabakwa-Gaming Laboratories International (GLI) kanye nabakwa-BMM Testlabs.
Izinzuzo zokusebenzisa i-Pragmatic Play
Imidlalo yakhiwe kusetshenziswa ubuchwepheshe be-HTML5 bakamuva.
Isofthiwe iyatholakala ku-PC, ku-Mac nakumaselula asebenzisa i-iOS noma i-Android.
Iyatholaka ngedawunilodi kanye nenguqulo yokudlala ngokushesha.
Isofthiwe ibandakanya umphathi wegeyimu ovumela abasebenzisi ukuthi balungiselele imidlalo yabo.
Inikeza umzuliswano wamabhonasi amahhala.
Imidlalo ihlolwe ngokuphelele yi-GLI ne-BMM Testlabs.